Ọsọ na pink. BWT onye nkwado ọhụrụ Formula1
Ụkpụrụ Team 1 Sahara Force India kwupụtara mmechi nke nkwado nkwekọrịta na onye na-eduzi European na-arụ ọrụ na teknụzụ ọgwụgwọ mmiri na ìgwè ọgwụ mmiri kacha mma Best Technology Water (BWT). Ugbua na 2017, ọkụ ndị agha Sahara Force India ga-enwe ụdị BWT dị mma, ebe a ga-esepụta ụgbọala ndị ahụ, yana okpu agha na ihe ndị na-agba ha na-acha na pink.
Egwuregwu nke nnukwu ihe ọ rụpụtara - nke a bụ aha nke ndị mmeri ụwa na-agba ọsọ na klas Formula 1, na-ejegharị gburugburu ụwa ma na-ewetara ọtụtụ nde ndị na-ekiri ya na ndị mmasị ya ezigbo obi ụtọ. Enwetaghị BWT na nchịkọta egwuregwu a enweghị ike ịkpọ random, n'ihi na ohere nke ijikọ ụwa ọnụ nke ụgbọ motọ na-emepe, taa ka ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa dị. Dị ka onye na-eduzi ndị na-emepụta ihe dị elu n'ọhịa nke ọgwụgwọ mmiri na ọgwụgwọ mmiri, ụlọ ọrụ BWT nke Ọstrịa ga-enwe ike iguzo na ụlọ na ụlọ ọrụ kachasị elu na nke na-aga nke ọma na ụwa na-ekerịta agụụ - ịhụnanya nke ọsọ na ụzọ ịga nke ọma.
Onye isi na Sahara Force India Vijay Malia kwuru, sị: "Ndị anyị na-arụ ọrụ siri ike ruo afọ 10 ma nweta ọganihu dị ukwuu. Ọdịdị nke onye isi ọhụụ ọhụrụ na-akwado BWT, anyị na-ewere dị ka ụgwọ ọrụ maka ọtụtụ afọ anyị na-arụ ọrụ, n'ihi na n'akụkọ ihe mere eme nke Sahara Force India, enwebeghịrị nkwekọrịta mmekọrịta dị otú ahụ. Taa na na paddock nke Formula-1, na n'etiti ọtụtụ ndị na-amaokwu nke motorsport, anyị ọhụrụ a na-arụ ọrụ nke ọma: ee, na 2017 ụgbọala anyị ga-apụta na track na a ọhụrụ agba atụmatụ, na nke a ga-abụ nkwenye siri ike na anyị nwere ekele dị ukwuu na mmekorita ya na BWT ma na-esite n'ike mmụọ nsọ ezi ihe ha bu n'uche. " Executive Director BWT, bụ Andreas Weisenbacher, kwuru, sị: "Mkpakọrịta ahụ na otu n'ime ndị na-enwe ọganihu nke egwuregwu nke Formula 1 n'ụzọ zuru ezu kwekọrọ na ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ ogologo oge. Ihe anyi choro taa bu ichota BWT. Anyị na-agbasi mbọ ike igosi ụwa ihe omuma anyị na ihe ndị anyị rụzuru, ebe anyị dị njikere inye ụmụ mmadu ụkpụrụ ọhụrụ nke ịdị ọcha mmiri - elixir nke ndụ nke ihe a kpọrọ mmadụ. Mụ na ndị mmekọ ọhụrụ anyị, anyị ga-eji ohere nke egwuregwu dị otú ahụ zuru ụwa ọnụ na-ewetara ndị na-azụ anyị ihe bụ isi: ahụ ike, ịdị ọcha na àgwà mmiri e riri taa bụ ihe bụ isi nke ndụ obi ụtọ. " Banyere ndị otu Sahara Force India Otu ìgwè dị nta nke na-ekere òkè n'usoro mmeri ụwa bụ Formula 1, jisiri ike gosiputa utịp utịp na afọ mbụ nke ịdị adị ya. Ndị India na-agba mbọ imebi stereotypes n'ihi ọrụ siri ike nke otu ahụ gara ihe mbụ kacha mkpa. Maka oge mbụ ị na-ekere òkè na agbụrụ na 2008, oge na-esote onye na-anya ụgbọ mmiri Sahara Force India nọ n'elu ala. N'ọdịnihu, ọ bụ naanị ndị ọrụ ahụ nwetara ego, rue na 2016 enwebeghị ike ịrụpụta ya - ebe nke anọ na Constructors Championship na-adabere na oge.
N'afọ 2017, ìgwè ahụ weere onye ọhụụ ọhụrụ - onye na-ebili elu nke onye mmeri French Esteban Okon. N'ịbụ onye Sergio Perez bụ onye nwere ahụmahụ, bụ onye nọworo na-abụbu otu n'ime ndị ọkachamara nke ụwa, jikọtara ya, ọ ga-agbachitere agbụrụ nke ndị otu ahụ ma soro ndị na-edu ndú na ndị na-akwọ ụgbọala nke ụwa na-alụ ọgụ. Taa, ndị ọkachamara niile kwenyere na otu n'ime ndị kachasị ike n'ọsọ mmeri nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ga-eme ka ndị India India nwee ike ịchọta ihe kachasị elu maka oge a. www.forceindiaf1.com
A na-akpọkarị Nchọpụta Mmiri Nke Ọma kachasị mma (BWT) n'ọhịa nke ọgwụgwọ mmiri na ọgwụgwọ mmiri taa. Teknụzụ dị iche iche maka ịgwọ mmanya, teknuzu, mmiri mmiri, na ndị na-ekpo ọkụ na-ajụ oyi na usoro ọkụ ọkụ na-achọ taa site n'aka ọtụtụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ: ụlọ ọrụ nzuzo na ndị ọchịchị, hotels na sanatoria, ụlọ ọrụ ahụike na ụlọ ọgwụ. Ihe BWT bu ndi oru oru nari puku ato na ato n'oru oru ugwo onu ogugu ndi ozo nke mmiri, nke di ogologo oge bu ihe mgbaru ọsọ iji meziwanye ndu nke mmadu site n'inye isi iyi nke ndu n'elu uwa uwa. www.bwt-group.com www.bwt.ru
Jamaica bụ Caribbean paradaịs maka ndị ezumike
Ebe ịchọta di di bara ọgaranya
Otu esi enwe obi ike na ndụ
Kedu ihe bụ nwanyị nke oge a
Kedu ndị ọkachamara ga-achọ na 2016, olee nke a ga-ebipụ?
Otu esi emeso ndi ozo
Kedu ihe ga-eme ruble na 2016?
Kedu mgbe bụ Nut Spice 2016? Ihe Omume
Otu esi ezute afọ ọhụrụ n'ụlọ
Kedu ka esi gbanye pusi ka ị na-akwa akwa ụlọ?
Ọgwụgwọ nke gastroduodenitis na ndiife ịgba akwụkwọ
Achịcha na mmanụ aṅụ na chocolate
"Nna" ọhụrụ n'ime ezinụlọ
N'izu mbụ nke ime ime: ihe mere nne
Ọmụmụ ihe gbasara nwoke na nna ya ukwu
Ihe si na sọrel
Pancakes na Philadelphia
Ime ime nwa: ihe ịrịba ama na mgbaàmà
Doll si kapron pantyhose: nna ukwu na klas na vidiyo